Soo dejisan WildBit Viewer 6.5 Standard... – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaMuuqaal sawir lehWildBit Viewer
Bogga rasmiga ah: WildBit Viewer
WildBit Viewer – sawir sawir oo taageera qaababka casriga casriga ah iyo kuwa caanka ah. Software wuxuu ka kooban yahay dhowr codsi oo kala duwan, mid ka mid ah taas oo suuragelin karta in la abuuro sawir muujin ah oo la socota kala-guurka u dhaxeeya sawirada leh saameyn kala duwan. WildBit Viewer waxaa ka mid ah tifaftiraha asaasiga ah ee aasaasiga ah si loo sameeyo hawlo sahlan oo edbin ah iyo midabada saxda ah ee faylasha sawirada. Software waxay taageertaa raadinta ugu sareysa ee sawirada taariikhda, cabbirka, magaca, iyo sifooyinka kale. WildBit Viewer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soocdo sawirro kala duwan, calaamadee oo ku dar liistadaada ugu caansan. WildBit Viewer ayaa sidoo kale kuu ogolaaneysa inaad maareyn karto profileska oo aad ka taageerto qaabeynta isku dhafka si aad si dhakhso ah u bedesho laba ilaaliye.
Taageerada GIF, TIFF, RAW
Muuqaal sawiro badan
Sawireynta iyo qaabeynta santuuqa qof kasta
Faylasha qoraalka aasaasiga ah
Raadinta sawirada sare
Soo dejisan WildBit Viewer
Faallo ku saabsan WildBit Viewer
WildBit Viewer Xirfadaha la xiriira